ट्रम्पले नै किन जिते ? पाँच कारण ! – US Nepal News
१. डेमोक्र्याटिकप्रति चरम असन्तुष्टि
निर्वाचनमा अश्वेत र आप्रवासीको बाहुल्य भएको राज्यबाट क्लिन्टनलाई अत्यधिक मत खस्ने अनुमान थियो । ल्याटिन अमेरिका र स्पेनिस मूलका अमेरिकीको सम्पूर्ण मत क्लिन्टनलाई जाने अनुमान गरिएको थियो । ट्रम्पको आप्रवासीविरोधी नीतिका कारण पनि धेरै आप्रवासीले उनलाई मतदान नगर्ने भविष्यवाणी गरिएको थियो ।
तर, क्लिन्टनले अश्वेतबाट अपेक्षाकृत रूपमा मत प्राप्त गर्न नसकेको चुनावपछिको सर्वेक्षणले देखाएको छ । निर्वाचनमा क्लिन्टनलाई ६५ प्रतिशत हिस्पेनिक स्पेनिस मूलका अमेरिकीको समर्थन छ भने ट्रम्पलाई २९ प्रतिशत छ । सन् २०१२ मा ओबामालाई ७१ प्रतिशत हिस्पेनिकको समर्थन थियो । ८८ प्रतिशत अफ्रिकी मूलका अमेरिकीले क्लिन्टनलाई समर्थन गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।